👉ရွာသူလေး 👈 စ/ဆုံး – Grab Love Story
အဖိတ်နေ့ည…… ……။ ထိုအဖိတ်နေ့ညကို ဦးသာလှမမေ့ပါ……ဒီနေ့ည တင်အိလာမည်…. ရင်မေက အကျိုးအကြောင်းအစုံအလင်ကို ဦးသာလှအား ပြောပြထားပြီးဖြစ်၏။မရင်မေနှင့် တင်အိတို့ ညှိနှိုင်းကြသောစကားထဲတွင် ငွေ ၂ သိန်းခွဲရမည်… ဦးသာလှ၏သွေးသား ဆန္ဒကို လိုက်လျောဖြည့်ဆည်းပေးရမည်။အများသူငါမရိပ်မိစေရန် ယောကျာ်းကို ငွေယူလွှတ်ရမည်။ မည်သူမှမရိပ်မိနိုင်သည့် အဖိတ်နေ့ညကို ရွေးရမည်။ အတိုးငွေ ၁၅ ကျပ်ဆိုလျှင် ၁၀ ကျပ်နှုန်း ခံစားခွင့်ပေးမည်။ သို့သော် ယောကျာ်းကို ငွေပို့ခိုင်းစဉ် ၁၅ ကျပ်နှုန်းနှင့်ပေးအပ်ခိုင်းရမည်။ ၁၀ ကျပ်နှုန်းခံစားခွင့်ကို ဝပ်တက်သည့်ညမှ ကိုယ်တိုင်သွားယူရမည်။
အမြင်ကပ်ကပ်ရှိလှစွာ ဆူဆူဆောင့်ဆောင့်လေး မြည်တွန်ရင်း…. ကူချွတ်ပေးလိုက် ၏။တင်အိ အပြုအမူလေးက ဦးသာလှကို ကြည်နူးစွဲမက်သွားစေ၏။ ဘောင်းဘီတို ကျွတ်သွားသောအခါ ဖြူဝင်းထွားအိနေတဲ့ ပေါင်တံနှစ်သွယ် ကြားက တင်းအိ​နေတဲ့ စောက်ဖုတ်ဖေါင်းဖေါင်းကြီးကို ဘွားကနဲ မြင်လိုက်ရ၏။ တင်အိက ပိုမြင်ရအောင် ပေါင်နှစ်ခြမ်းကို မသိမသာဖြဲပေးလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်ကြီးက ပေါင်အဟတွင် သိသိသာသာ ပြဲဟသွားပြီး အတွင်းသားနီနီနုနုတွေကိုပါ မြင်လိုက်ရ၏။
တင်အိအနေဖြင့် ယခုသွေးသားဆန္ဒဖလှယ်ပွဲတွင် လုံးဝအညံ့ခံ၍ မဖြစ်ပါ။ ဦးသာလှကျေနပ်လျှင် ကျေနပ်သလောက် သူ့အဖို့အခွင့်အရေးတွေ ရလာနိုင်၏။ ဦးသာလှသဘောကျနှစ်ခြိုက်စေမည့် အလုပ်မျိုးကို ကြားဖူးသလောက် လုပ်နိုင်သလောက် အစွမ်းကုန်လုပ်ပေးမည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားပြီးဖြစ်၏။ သူမချေးရမည့် ငွေတွေက နည်းနည်းနောနောမဟုတ်။ ကုန်က အကြီးအကျယ် ရှုံးခဲ့သည့်အ​လျှောက် ရှင်းရမည့်ငွေတွေက မရှင်းနိုင်လျှင် သူ့ယောကျာ်းထောင်ကျပြီး ဘဝပါပျက်မည်။ ဘဝပျက်မည့်အရေးနှင့် ယှဉ်လိုက်လျှင် သူ့စောက်ဖုတ်ကို ဦးသာလှထံ ထိုးအပ်ရသည့်အလုပ်က ဘာမှမပြာပလောက်သည့် အလုပ်မဟုတ်။
ပထမဆုံးတိုက်ကွက်အဖြစ် တင်အိက ဦးသာလှ၏ ပေါင်ကြားအတွင်းသို့ ဒူးတုတ်ထိုင်ချလိုက်ပြီး လေးဖက်ထောက်ကုန်းကာ လီးကြီးကို ခပ်တင်းတင်းဆုတ် ကိုင်လျှက် ပါးစပ်ဖြင့် ငုံခဲစုပ်ယူလိုက်သည်။ လီးကြီးက တုတ်လွန်းသဖြင့် အကုန်လုံး သိမ်းကြုံးမငုံနိုင်ဘဲ တဝက်တပျက်သာ ငုံခဲထားနိုင်သည်။ ပူနွေးစိုစွတ်သော အာငွေ့နှင့် ကြမ်းရှသောလျှာအတွေ့က အရေးပါသော ကာမအကြောအစုံကို စုပ်ယူမိ လိုက်သောအခါ ဦးသာလှတစ်ယောက် ကော့တက်သွားပြီး အီးကနဲ ကောင်းကောင်း ညီးလိုက်သည်။
ဦးသာလှစကားကြောင့် တင်အိတစ်ယောက် ဦးသာလှလီးကြီးကို လျှာဖြင့်ဝိုက်ပတ် ၍ လျှက်ပေးနေရာမှ ခေတ္တရပ်လိုက်ပြီး ဒူးတုတ်လျှက် ကနွဲ့ကလျ ထိုင်နေသည်။ ဦးသာလှက တင်အိကိုယ်ကာယအလှများကို တဝကြီးကြည့်ရှုခံစားရင်း ဝီစကီတစ်ခွက် ငှဲ့သောက်လိုက်သည်။ ဖန်ခွက် ပြန်အချ တင်အိက အဆင်သင့်ပင် ဝက်အူချောင်းနှစ်ချောင်းပါးစပ်ထဲ ခွံ့ပေးလိုက်၏။ ဦးသာလှ တစ်ယောက် အကျေနပ်ကြီး ကျေနပ်နေစဉ် ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးကို အခွံနွာ၍ ပါးစပ်နားထိုးပေး လိုက်သည်။ ဦးသာလှက တဝက်ကျော်ကျော်ကို ကိုက်ယူစားလိုက်သည်။ ဤမျှဆိုလျှင် တင်အိသဘောထားကို အတော်အတန်ရိပ်မိသွားပြီ။ တင်အိနှင့် လက်တွဲလို့ ကောင်းကောင်းကြီး ရနိုင်ကြောင်း သဘောပေါက်လိုက်သည်။
အိပ်ခန်းထဲရောက်သောအခါ အလွန်သားနားလှပသော မွေ့ယာကြီး အထက်သို့ တင်အိခန္ဓာကိုယ်ကို ညင်သာစွာ ပက်လက်ချလိုက်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကို ဘေးတဖက်ဆီသို့ပြစ်ချလျှက် မျက်လုံးစုံမှိတ်ရင်း တင်အိ တစ်ယောက် မှိန်းနေရှာသည်။ သူ့ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကမူ ဦးသာလှခါးကို ချိတ်ထားလျှက်ရှိသည်။ အတော်အတန် အမောပြေသွားသောအခါ တင်အိခြေထောက်နှစ်ချောင်း ကိုဆွဲမလိုက်ပြီး ပေါင်နှစ်ချောင်းကို ရင်ဘတ်ဆီ ဖိတွန်းထားလိုက်သည်။ သေချာအောင် ထပ်ဖိကြည့်လိုက်သေး၏။ ထို့နောက် သူ့လီးကြီးကို ဒစ်အရင်းလောက် ရောက်သည်အထိ ဆွဲနှုတ်သည်။ ပြီးတော့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ပြန်သွင်းသည်။